Momba ny Ellicott Dredges, orinasa mpamokatra fitaovana misy Dredge
Naorina i Baltimore.
Manaja an'izao tontolo izao.
Ellicott Dredges dia mpamatsy trondro fisotroana kapoaka vita amina kalitao any Baltimore, Maryland (Etazonia). Ny anaran'ny marika Ellicott® dia nalaza eran'izao tontolo izao noho ny dredge mateza, mahavita ary mahavita zavatra maro, miverina amin'ny fanamboarana ny lakandranon'i Panama tany am-boalohany. Izahay eto dia mamolavola ny dredge tsirairay avy eto amintsika avy amin'ny foibenay. Ny orinasa mpanamboatra dia any Baltimore, Maryland, ary New Richmond, Wisconsin.
Hatramin'ny 2009, Ellicott Dredges dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana orinasa Markel Ventures. Zanaky ny Markel Corporation (NYSE - MKL), Markel Ventures dia mampiasa olona 7,000 manerana ny sehatry ny famokarana, ny mpanjifa, ny serivisy, ny serivisy ara-bola ary ny sehatry ny fahasalamana. Ny sampana tsirairay dia miasa tsy miankina nefa mitazona ny fanohanan'ny Markel Ventures.
Nomery marika Ellicott®
Amin'ny maha-mpitarika manerantany ny rafitra dredging sy vahaolana, ny marika Ellicott® dia nanangona isa mahavariana ao amin'ny indostria.
Navoaka ny Dredges